Chili sy Chine: Famonjena ireo mpitrandraka ankibon’ny tany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Novambra 2010 19:09 GMT
Ny vaovao mikasika ny fanavotana ireo mpitrandraka harena ankibon'ny tany nahombiazana nataon'ny fanjakana tany Chili tamin'ny 14 oktobra no narahan'ny loza nitranga tamin'ny toerana fitrandrahana an-kibon'ny tany tao Pinyu, ao amin'ny faritanin'i Henan any Chine tamin'ny 16 oktobra. Ity loza tany Chine ity, vokatry ny fipoahan'ny entona sy ny vovoka saribao, dia nahafaty mpitrandraka 37. Raha ampitahaina ny asa famonjena natao tamin'ireto firenena mandroso anankiroa ireto dia nokianin'ny olona ny tsy fahampian'ny fanajana mahaolona raha mikasika an'i Chine. Raha lohalaharana ity firenena ity amin'ny fampandrosoana, maro no mihevitra fa raha mihamatanjaka ny lafiny ekonomia dia tsy misy lanjany kosa ny olona.
Chili sy Chine mamonjy mpitrandraka saribao
Isaky ny misy loza mihatra amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany any Chine, dia afenin'ireo manam-pahefana ao amin'ilay tanàna nitrangan'izany loza izany foana fa tsy miantso vonjy amin'ny faritany mifanila aminy izy na koa any amin'ny fanjakana foibe. Beifangkeke manontany ny fihetsik'ireo manam-pahefana sinoa manoloana ain'olona:
Iny famonjena mpitrandraka nataon'i Chili iny dia azo lazaina ho fiaraha-mientana iraisampirenena. Voalaza mantsy fa ny vondron'orinasa Siliana momba ny viraty tompon'andraikitra tamin'iny asam-panavotana iny, no nila hevitra tamin'ny kaompania mpitrandraka harena an-kibon'ny tany avy any amin'ny firenena hafa, tahaka ny NASA hanoro izay tokony atao hamonjena voina. Izany karazana fanohanana iraisam-pirenena izany no nanome hery ireo mpamonjy voina sy ireo mpitrandraka viraty tafahitsoka tany ambanin'ny tany. Ny mpanoratra sasany, vokatr'izany, nanamarina fa sarobidy ho an'ny Siliana ny ain'ireto mpitrandraka an-kibon'ny tany ireto noho ny fampideraba ivelany ny fireneny. Ny zava-pitranga mahazatra any amin'ny sehatra fitrandrahana harena an-kibon'ny tany any Chine mantsy dia afenin'ireo tompony ny zava-misy, tsy voafehin'ireo mpampihatra ny lalàna ny lafiny fiarovana ary ny ankamaroan'ireo toeram-pitrandrahana koa dia tsy ara-dalàna avokoa. Ohatra tamin'ilay loza nahazo ny toeram-pitrandrahana any Henan farany teo, nisy ny fampandrenesana naneno tsy an-kiato 22 ora mialoha ny fipoahana fa miakatra be ny entona, kanefa tsy nisy ny fepetra noraisina hiatrehana ny zava-misy. Taorian'ny loza, nilaza ny media fa ny fampangatsiahana avy amin'ny rivotra no tsy nipetraka tsara. Na izany na tsy izany, hitantsika izay ny tsy fitoviana eo amin'ny firenena roa mandroso, Chili sy Chine, amin'ny fomba fanaony manoloana ny fiainan'ireo mpitrandraka harena an-kibon'ny tany.
Ilay mpitoraka bilaogy 70 yard manambara fa novan'ny fanjakana any Chili ho fihomehezana iny zava-doza iny, raha tsy izany kosa any Chine, izay ny toeram-pitrandrahana saribao dia mampieritreritra ny helo:
Tsy nampalahelo mihitsy ny famonjena ireo mpitrandraka tany Chili! Tena zavatra nampihomehy aza. Voalaza fa ny vahoaka sinoa, indrindra fa ny mpitrandraka, dia mitsiriritra fatratra iny famonjena nahitam-boka-tsoa tany Chili iny. Mety ho faty any ambanin'ny tany any isan'andro ny mpitrandraka aty amintsika, raha tsy fantatry ny olona akory ny fiakaran'ny tahan'ny loza mpahazo ireo mpitrandraka ireo. Tsy resahana ny fahapotehan-javatra, tsy raharahian'ny olona akory izany. Na dia tsy olana amin'ny Sinoa aza ny vola sy ny mpamonjy voina, raha vao misy ny loza mihatra amin'ny teoram-pitrandrahana iray, dia kely ny vintana mety hahavelona ny mpitrandraka. Tsy mitovy amin'ny zavatra niseho tany Chili, tafajoro tsara noho ny fahagagana ireto mpitrandraka rehefa taty ambonin'ny tany ary “noterena” hijery fahasalamana any amin'ny hopitaly, ny hany azon'ny mpitrandraka aty amintsika andrasana dia fanantenana mitsilopy, ary ny azon'ny fianakaviany atao dia ny malahelo azy tsy misy fiafarany.
Fanovana tsy miankina ireo toeram-pitrandrahana any an-kibon'ny tany sy ny vokatr'izany tsy ho zaka
Cai Chongguo, izay nitoraka bilaogy mikasika ny fitrandrahana an-kibon'ny tany any Chine tato anatin'ny 10 taona izao, no manazava ny nofy ratsy amin'ny fitrandrahana izany any Chine amin'ny alalan'ny famerenana ny tantara tamin'ny fanaovana ity asam-pitrandrahana ity manerana ny firenena, kanefa notsipahan'ireo tompon'ny toeram-pitrandrahana nasesiky ny tombom-barotra azony:
Raha iverenena ny taona 1990, tsy voasakan'ny fanjakana ny firoboroboan'ny lafiny ekonomia, sy ny fiakaran'ny vidin'entana. Mba hanamaivanana ny enta-mavesatra, dia nampirisika ny fanjakana tamin'ny fivarotana tamin'ny tsy miankina ireo toeram-pitrandrahana saribao ny fanjakana ary nanapaka lalàna mikasika ny fitrandrahana. Vokatr'izay, mpividy tsy miankina vitsy kely sady mahantra no nividy toeram-pitrandrahana an-kibon'ny tany any amin'ny faritany toa an'i Shanxi, Inner Mongolia ary Henan. Nandritra izany fotoana izany dia banky ny toeram-pitrandrahana an'ny fanjakana ka voatery namidy tamin'ireo tsy miankina. Ireo izay tsy lafo kosa dia hiantohan'ny tsy miankina ihany .
Cai manindry fa nanjary niaro ireo tompon'ny toeram-pitrandrahana tsy miankina ny fanjakana:
Satria niala tamin'ny fitantanana irery ireny toeram-pitrandrahana ireny ny fanjakana, dia nanjary tsy ara-dalàna sady tsy nangarahara ny fanaovana azy ireny ho tsy miankina. Nanova hatramin'ny fakany ny herin'ny lalàna tany amin'ny toerana nisy azy izany toe-javatra izany, ary niova tahaka izany koa ny fidiran'ny hetra tamin'ny fanjakana, ary niantraika hatrany amin'ny toe-tsaina izany. Nahasarika tokoa ny fanovana ho tsy miankina ireo toeram-pitrandrahana ho an'ireo tompon'izy ireny matanjaka, ary nanome azy sy ny fianakaviany fahafahana, kanefa maintin'ny kolikoly koa izany. Izany hoe, maro amin'ireo tompon'andraikitry ny fanjakana any an-toerana no nanjary mpitan-tsoratry ny ny tompon'ny toeram-pitrandrahana, ary afenin'izy ireny ny loza mihatra mba hiarovana ny tompon'ny toeram-pitrandrahana.
Ny isan'ireo mpitrandraka harena an-kibon'ny tany sinoa maty betsaka noho ny isan'ny miaramila maty tany Iraka
Malaza ny Sinoa amin'ny isan'ny maty rehefa misy ny loza mahazo ny toeram-pitrandrahana saribao. Raha iverenana ny taona 2009, ilay mpitoraka bilaogy Yuchang mampitaha ny isan'ny miaramila amerikana maty tany Iraka amin'ny isan'ny mpitrandraka sinoa maty, ary nahita izy fa latsaka 7 heny ny isan'ny miaramila amerikana maty!
Ny 30 desambra 2006, miaramila amerikana iray no matin'ny baomba tany Baghdad, nitarika ny isan'ny maty ho 3 000. Tamin'izay andro izay dia faly be ny media tsy tia amerikana sy ireo tanora tezitra, ny isan'ireo mpitrandraka saribao sinoa maty dia toy izao . (Mariho: araka ny tarehimarika ofisialy, ny isan'ireo maty dia toy izao: 2003: 6,683, 2004: 6,027, 2005: 5,930, 2006: 4,746. Raha atambatra ireo tarehimarika tao anatin'ny efatra taona ireo ary anesorana ny ampahany tamin'ny taona 2003 (nanomboka ny volana aprily ny ady), ny fitambarany dia manome 21,716).
Vao tamin'ny volana lasa, nilaza ny media sinoa fa tamin'ny 30 desambra 2007, dia tafakatra ho 3 840 ny isan'ny miaramila amerikana maty tany Iraka. Tamin'izay andro izay koa, nanambara ny Sampan-draharaha momba ny Fiarovana amin'ny Asa fa hatramin'ny janoary ka hatramin'ny oktobra tamin'izay taona izay, dia nisy loza nitranga 1 920 tamin'ireo toeram-pitrandrahana tany Chine, ka niteraka fahafatesan'olona 3 069. Kivy aho teo am-pamakiana izany.